Baalalkii Flanders-ka ee Field "Inta udhaxeysa Jannada & Naarta II" Cusbooneysiin
Kooxda ka dambeysa Wings Over Flanders Field ayaa soo bandhigtay dhowr shaashadood oo dheeri ah oo dheeri ah "Inta udhaxeysa Jannada & Jahannamada II", nooca xiga ee weyn ee jilitaanka
Baalasha Filand Flanders: Dhamaantiin waad salaaman tihiin, Halkan waxaa ku yaal dhowr shaashadood oo muuqaal ah oo laga soo qaaday BH&H II ee soo socda. Sawirkii ugu horreeyay ee la qaado intii lagu jiray tababarka England, iyo sawirka labaad waxaan kaliya jeclaaday habka dhulku hadda u qurxoon yahay ee looga baxo daruuraha iyo teh SE5a Viper oo u muuqda mid wanaagsan.
WWI waxay keentay waaberigii duulimaadka dagaalka - weligaa miyaad isweydiisay sidee noloshu u ahayd Dagaalkii Koowaad ee Duulimaadyada Diyaaradaha ee duulimaadka ku maraya waaga hore ee duulimaadka halista ah ee safafka hore? Miyaad jeceshahay inaad la kulanto cabsida, xiisaha iyo dagaalka quusta u ah badbaadadaada kombuyutarkaaga? .. Ha fiirin baalal dheeri ah oo ka sarreeya Flanders Fields - WWI-da ugu qufulan dayuuradda duulista .